एउटा सपनाको अन्त्य (संस्मरण) – Radio Jajarkot 105.6 FM
Home / कला/साहित्य / एउटा सपनाको अन्त्य (संस्मरण)
एउटा सपनाको अन्त्य (संस्मरण)
Posted on February 12, 2016 by radiojajarkot in कला/साहित्य, विशेष with 1 Comment
पाठक संख्याः 480
– सुरेन्द्र सिंह
बारेकोटको घाटबजारबाट पाँच मिनेटको नाक जोगाएर हिड्नुपर्ने उकालो र दश मिनेटको गहुँ बारीका कान्लैकान्ला नाघेर उक्लेपछि बतास सँग जिस्किदै गरेका केराका पातहरु देखिन्छन् । तिनै केराका पातहरुलाई पछ्याएर कान्लै कान्ला माथिको साँघुरोबाटो हिडेर गयो भने आरु र नास्पतीका रुखहरुले पहिला स्वागत गर्छन् । र, त्यही नेर देखिन्छ, आँखी झ्याल सहित खरले छाएको बीरबहादुर शाहीको पुरानो घर ।
सेतो कमेरोले पोतिएको घरका बाहिरी भित्ता । घर भित्र पस्ने एउटा अल्ली ठुलो मुल ढोका । र, ठुलो ढोकाको सिरानमा पाँच कक्षामा पढ्ने भाइले बाँङ्गाटिङ्गा अक्षरमा कोरेको साढे चार अक्षरको शब्द, ‘स्वागतम’् । सानो आँगन, आँगनको डिलमा लहरै आरुका रुखहरु । आँरुका फूलका कोपिला जस्तै भाइबहिनी । अनि आरुकै रुख जस्ता शान्त बृद्ध बाआमा ।
माघ फागुनमा आरुले फुलाएका सुन्दर फुलहरु जस्तै ती एकजोर बृद्धबृद्धाले जन्माएका फुलहरु जिन्दगीको कुनै माघ फागुनमा परिपक्व भएर फक्रिने छन् । र, उनीहरुको जिन्दगीको वातावरणमा सुगन्ध छर्नेछन् । यस्तै आशामा बाँच्दै गर्दा उनीहरुलाई जीवनको थप उकालो चढ्ने ऊर्जा मिल्दो हो । दमले ग्रस्त भएकी आमा र ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित बालाई मिठो कल्पनाले राहत पनि हुदो हो ।
घुम्रिएको छोटो कपाल माथि जिब्रे टोपी । गहुँगोरो वर्ण । चेक सर्टमा जिन्स पाईन्ट । कहिलेकाँही एअर प्रुफ ज्याकेट पनि झुन्डिएको हुन्थ्यो, शरिरमा । एभरेज हाइट । हरपल केही न केही सोचीरहेको जस्तो आँखा र निधार । ओठमा मन्द मुस्कान । यही हो उसको गेटअप ।
उनी सिर्जनात्मक थिए । कविता र गजल लेख्थे । आफ्ना रचनाहरुमा आफ्नै जिन्दगीका दुःख र पीडाहरु बढी ओकल्थे । उनका रचनाहरु अलि बढी नै प्रगतिशिल हुन खोज्थे । नयाँ कविता र गजल लेख्ने वित्तिकै रात विताउन मैसँग आउथे । र, मेरो डेराको साँघुरो कोठा भित्र अटाएका दराज, पुस्तक, कपडा र मलाई श्रोता बनाएर सुनाउथे ।
यस्तै हेलमेल सँगै हाम्रो आत्मीयताको ग्राफिक्स एकाएक बृद्धि भएको थियो । म पनि साहित्यमा रुचि राख्थे । जाजरकोटमा बसेर हामी दुबै जना पत्रकारिता र साहित्यमा केही गरौं भन्ने सोचबाट प्रेरित थियौं । दुबै जना मिलेर ०६८ साल तिर साहित्यीक पत्रिका पनि प्रकाशन भयो, सिलसिला । तर, आर्थिक समस्याका कारण निरन्तरता पाउन सकेन । खाने गाँस कटाएर पत्रिकालाई बचाउन पनि सकिएन ।
उनी प्रेस चौतारीमा आबद्ध थिए । म भने प्रेस यूनियनमा । तर, हामी बीच आस्था र विचारका कारण कहिल्यै मतभेद भएन । मतभेद हुन्थ्यो भने साहित्यमा । मलाई कथा र उपन्यास मनपथ्र्यो, उनलाई कविता र गजल । बस यही नै थियो हामी बिचको भिन्न बिचार ।
उनी विकासे कार्यकर्ताको रुपमा स्थानीय विकास कोषमा कार्यरत थिए । म खानेपानीमा करारको जागिर गर्न थालेको थिए । जाजरकोटमा सरसफाईको अभियान शुरु भएसँगै हामी सँगसँगै रह्यौं । उनी भन्थे, हामीले जागिरका लागि जागिरी होईन, समाज परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि केही गर्नुपर्छ । त्यति हुदा हुदै कहिलेकाँही उनी बर्बराउथें– समाज परिवर्तनको ठेक्का हाम्रो मात्रै होइन । उनको भनाईको प्रतिक्रिया ओठको एउटा कुनाबाट मुस्कान चुहाएर दिन्थें, म ।
समाज र देशको बारेमा चिन्ता र चिन्तन गर्ने गरे पनि उनको जिन्दगी भोगाईको अनुभूति भने अलग्गै थियो । आफूले बाँचेको जिन्दगीको सवालमा उनी निकै नै ‘साइको’ बन्थे, कहिलेकाँही । हरिभक्त कटुवालले ‘यो जिन्दगी खै के जिन्दगी ?’ शायद मेरै लागि लेखेका हुन् की भन्ने उनलाई लागिरहन्थ्यो । प्रायः यो कविता उनको ओठमै झुन्डेको हुन्थ्यो ।
उनको कुनै ठुलो सपना पनि थिएन । आम जाजरकोटीले झैं देख्ने औषत सपना उनको पनि सपना थियो । बाआमा र भाइबहिनीका लागि वर्षमा एक जोर नयाँ लुगा फेरिदिने अनि भाईबहिनीलाई सरकारी स्कुलमै धेरै कक्षा सम्म पढाउने र पुरानो घरलाई भत्काएर ठुला झ्याल भएका चार कोठे घर निर्माण गर्ने । जहाँ बाआमा, भाइबहिनी र पाहुना आउदा अलग अलग सुताउन पाईयोस् । अनि फराकिलो आँगन, जहाँ पाहुनाहरु आउँदा काम्लोमा बसुन्, गाउँका दाजुभाई आउन्, मान्द्रोमा बसेर दुःख सुख गरुन् । बस् ।
‘जागिर गरेको पैसाले खलंगा बस्न ठिक्क हुनेभो ।’ कुनै दिन ठाँटी बजारको चिया पसलमा उनले आफ्नो अवस्था सुनाएका थिए । ‘ऋण नगरी घर शुरुवात गर्न नसकिएला जस्तो छ ।’
पछिल्लो समय जिल्लालाई खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा गर्ने अभियान तीब्र हुदै थियो । डि–वासको सचिवालय खानेपानी कार्यालय नै हुने हुदा म अल्ली व्यस्त हुन्थे । उनी पनि बारेकोटका केही गाविसमा यही अभियानमा जुटेका थिए । फोन मार्फत कुरा हुन्थ्यो । तर प्रत्यक्ष भेट पातलिएको थियो । जिल्लाका ३० वटा गाउँ विकास समितिहरु खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा भएर सकिए । ७१ सालमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरियो, ठुलै उत्सवका बीच । सभासद, ठुलठुला विकासका साझेदारहरु, सरकारी निकायका क्षेत्रिय र विभागिय प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रमको औपचारिक समापनमा अभियानलाई सहयोग गर्ने पत्रकार, अभियन्ता, कार्यालय, लगायत थुप्रै व्यक्तिले प्रशंसा, सम्मान र कदर पत्र पाए । नपाए पनि हुने धेरै जनाले प्रशंसा र सम्मान पाएको दृश्य मैले क्यामेरामा कैद गरिरहें । तर, उनको नाम नै उच्चारण भएन । बीरबहादुर शाहीको नाम छुटेकोमा मलाई ठुलो ‘अन्याय’ लागेको थियो ।
त्यो दिन नुन कम भएको तरकारी जस्तै कार्यक्रम खल्लो लागिरह्यो । सरसफाईको अभियानमा उनी पत्रकार कम र अभियन्ता बढी थिए । उनले बारेकोटका धेरै जसो गाउँमा सरससफाईको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका गरेका थिए ।
भोली पल्ट उनीसँगको भेटमा मन अमिलो पार्दै मैले भने, ‘तपाईले गरेको कामको उचित सम्मान गरिएन, मलाई साहै« दुःख लाग्यो ।’
साविककै मन्द मुस्कानका साथ मलाई सोधें, ‘प्रशंसा र सम्मान कुन आधारमा मुल्यांकन गरेर दिईएको रहेछ, तपाईलाई त थाहा होला नि ?’
‘खै, मलाई थाहा भएन । यसका लागि पनि उपसमिति बनेको थियो । त्यही उपसमितिले लिस्ट तयार गरेको हुनुपर्छ । तपाईको नाम छुट्यो कि छुटाईयो । मैले थाहा पाइन ।’
त्यसपछि हामी दुबै मौन रह्यौं । शायद उसलाई लाग्यो होला– सचिवालयमा काम गर्ने मान्छे मैले नै उसको नाम राखिन । मैले प्रयास गर्नुपथ्र्यो ।
हाम्रो अन्तिम भेट यही थियो ।
खलंगाको पश्चिममा देखिने छिप्रेनाको डाँडासँग जोडिएको क्षितिज माथि उक्लेको सूर्यका किरणका लालीहरु ‘डिसकलर’ हुदै गइरहेका थिए । प्रायः चिसो स्याठ चलिरहने जाजरकोटको माघ महिनाको धर्ती गोधुँली साँझ सँगै भर्खरै प्राण उडेको मानव शव जस्तै बिस्तारै चिसो हुदै थियो । हुनमान स्कुलको छेवैंमा रहेको बाँसको झ्याङ्ग भित्र चर्को स्वरमा एक हुल सिम्टाली आपसमा झगडा गर्दै थिए ।
म मेरा डेराको बार्दलीमा बसीरहेको थिएँ । नेपालगन्जमा अध्ययनरत एकजना बारेकोटको साथीले फोन मार्फत भन्यो ‘बीरबहादुरको रुखले किचिएर निधन भयो भन्ने खबर छ, तपाईले थाहा पाउनुभयो ?’
‘ठट्टा त गर्नु तर यस्तो अनावश्यक ठट्टा कहिल्यै नगर्नु यार ।’ मैले उसलाई झपार्दै भनें ।
उसको बानी नै त्यस्तै थियो । प्रायः ऊ मसँग जिस्किरहन्थ्यो । तर, यसपल्ट उसको बोलाईको लवज ठट्टा जस्तो थिएन ।
‘भगवान कस्सम ! हो रे ।’ उसले गम्भीर हुदै भन्यो ।
बाँसको झ्याङ्गमा भैरहेको सन्टालीहरुको विवाद मिलिसकेको थियो । धेरै टाढा चारोको खोजीमा गएका चरा आफ्नो गँुडलाई सम्झेर फर्के जस्तै मान्छेहरु घर फर्किरहेका थिए ।
थाप्ले स्थित मेरो डेरा । डेरा नजिकैको ट्वाल्ल परिरहेको हनुमान स्कुल । निकै शान्त थिए । बोहोराको उकालोमा कराउदै र कन्दै एउटा बस आइरहेको थियो । गाडीको झिलिक्क लाईटले हुनुमान स्कुलको टिन टल्कियो । दक्षिण तर्फ एकनासले बगीरहेको भेरी नदीको सुस्केरा कानमा गुन्जियो । गालामा छोएर एक झोका बतासले पछाडी हाम फाल्यो ।
मेरो कानमा कसैले सुस्तरी सोध्यो, ‘प्रशंसा र सम्मान कुन आधारमा मुल्यांकन गरेर दिईएको रहेछ, तपाईलाई त थाहा होला नि ?’
मन चिसो भयो । घाँटीमा भातको गाँस अड्के जस्तै किक्लिक्क भयो । ओठ थर्थराए । आँखाका परेलाहरु झिम्किए । घाँटी सम्म ‘कचिलो’ महसुस भयो ।
मन रोएछ । आँशु बगेछन् । पछि थाहा भयो ।
खलंगाको मुख्य बजार, ठाँटी बजार । धमिलो दिन थियो । गाउँबाट किनमेल गर्न आएकाहरुको घँुईचो थियो । म कुनै मोबाईल पसलमा छिरेको थिएँ । किन छिरें, थाहा थिएन । कसैले मेरो वास्ता पनि गरिरहेको थिएन ।
सेतो धर्के शर्ट, कालो पाईन्ट, अनि मधुर मुस्कान । गहिरो ताल जस्तै शान्त आँखा । ऊ यता उता हेर्दै मेरो नजिक आयो । आफ्नो मोबाईल खेलाउन थाल्यो, केही बोलेन ।
मेरो बेचैनी बढ्यो । आफ्नो नजिकैका सबैलाई नियालें । सबै अपरिचित थिए । काम ज्वरो आए जस्तै मेरो जिउ काम्यो ।
मोबाईल खेलाउदै ऊ मेरो छेवैंमा आयो । र, मोबाईल मेरो हातमा थमाउदै भन्यो– ‘राजा ‘टाइम’ मिलेन, मेरो मोबाईलको ‘टाइम’ मिलाईदिनु प¥यो ।’
ऊ त्यही बीरबहादुर थियो । जो अब यो वास्तविक संसारमा थिएन । तर, हरेकका सम्झनामा बाँचिरहेको थियो ।
साँघुरो डेरामा एक थान मेरो ज्यान पल्टिरहेको थियो । टुकीमाराको हलुका प्रकाश कोठाको एक कुनामा थुप्रिएको थियो । कपडाहरु अव्यवस्थित छरिएका थिए । भित्ताका केही पुस्तक र दराज मलाई नियालीरहेका थिएँ । घाँटी सुख्खा थियो । ज्यान गहुगों थियो । आँखाका चेप रसाएका थिए । सपना रहेछ । आफ्नो प्रिय मान्छे भेटिने भनेकै सपनामा रहेछ ।
सपनामा उसले भनेजस्तै उसको ‘टाईम’ मिलेको थिएन । कास उसको ‘टाईम’ मिलाउने कुरा मेरो हातमा हुदो हो त अल्पआयूमै उसले यो संसारबाट बिदा लिनु पर्थेन ।
बुढापाकाहरु भन्छन्– मरेको मान्छे सपनामा देख्यो भने पानी पर्छ रे । र, पानी प¥यो भने सपना देख्नेसँग कुनै गुनासो हुदैन रे । ढोका खोलेर बार्दलीबाट बाहिर चियाएँ । पानी त के आकाशमा एक टुक्रा बादल पनि थिएन । बरु पूर्व तर्फको क्षितिज राताम्य भएको थियो । शायद सूर्य उदाउने तरखरमा थियो । शायद ऊसको गुनासों म प्रति बाँकी थियो । त्यसैले पानी परेन । चिसो सिरेठोले शरीरमा काँडा उम्रिए । सपनाको ‘ह्याङ्गओभर’ ले पुनः जिउ लल्याकलुलुक भयो । कोठा भित्र पसें ।
राम्रा मान्छेहरुको खाँचो स्वर्गमा हुन्छ भन्छन् । शायद राम्रा मान्छेहरु बढी भएरै स्वर्ग, स्वर्ग भएको होला ।
एउटा नयाँ घर बनाउने सपना बोकेर बाँचेको तन्नेरी । त्यही घरको काठले उसको जिन्दगीको यात्रा रोकियो । त्यही घरले उसको सपना भाँचिदियो । अपुरा र अधुरा सपनाहरुको अन्त्य नै एउटा जिन्दगीको अन्त्य रहेछ ।
उसको सम्झनामा कहिलेकाँही बारेकोट पुग्छु । बारेकोट, बारेकोट जस्तो लाग्दैन । नलगाड, नलगाड जस्तो लाग्दैन । रामीडाँडा मेलाका हरेक संस्करणहरु बकवास लाग्छन् । कुशेमुशे, चाखुरे र कराईचुली आफ्नो सौन्दर्यको फगत अहंमता दर्शाइरहेका चट्टान जस्तो लाग्छन् । कहाली लागेर आउँछ । ऊ बिनाका हरेक थोकहरु व्यर्थ लाग्छन् अचेल ।
अल विदा, डियर !
अन्त्यमा, उसैले कोरेका अन्तिम हरफहरु,
कतै म दोधारमा पर्छुकि चिन्ता छ ।
खोली छोडी सागर तर्छुकी चिन्ता छ ।।
रोग, भोक, गरिबी र दुःखले सताउँछ
त्यसैले त बसाई सर्छु कि चिन्ता छ ।।
स्रोतः सुरेन्द्र सुमन
तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस ।
जाजरकोटमा सुनखानीको सम्भावना, चिनियाँटोलीकाे अध्ययन
आगलागीबाट ज्यान गुमाएका आफन्तलाई १/१ लाख दिईने, पेट्रोल डिलर व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम ।
नाम जस्तै ठुलो दिलका डा. दिलजान
प्रहरी मेरो साथी जाजरकोटमा पनि शुभारम्भ ।
One thought on “एउटा सपनाको अन्त्य (संस्मरण)”
purna babu chand February 13, 2016 at 5:20 am
raely I miss also mrs bir bhd
आगलागीका घाइते मानसिंहको निधन (2,563)
जाजरकोटमा ५ सय ८० राउन्ड गोली भेटियो (2,449)
कतारमा जाजरकोट प्रवासी सेवा समाज गठन (2,179)
आगलागीबाट ज्यान गुमाएका आफन्तलाई १/१ लाख दिईने, पेट्रोल डिलर व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम । (1,640)
प्रवाशी नेपालीको पीडामा मलम लगाउदै लक्ष्मण (1,610)
प्रतिबन्धित तिन किलो पाँचऔले सहित १ जना पक्राउ
पश्चिम जाजरकोटमा विकराल बन्दैछ छाउपडी प्रथा
भेरीमालिका नगरपालीकाे नगरिषद अाज हुदै ।।
उपचारमा १२ लाख सकियाे तर घाउ निकाे भएन
साढे चार किलो अवैध चरेस बरामद
हराउदै लोक देउडा भाका
ठाकुरजी पदमार्गको प्रचार प्रसार नहुदा ओझेलमा
जाजरकोटमा ५ सय ८० राउन्ड गोली भेटियो
जाजरकोटलाइ चिनाउने भिडियो वृत्तचित्र (भिडियो सहित)
बस दुर्घटनाका परिवारहरुको पीडा भिडियोमा
अन्तरविद्यालय स्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु ।
२३ वर्षपछि नेपाललाई साग फुटबलमा स्वर्ण
राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डकाे उपाधि त्रिभुवनले जित्याे
जाजरकोटमा आठौं राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड शुरू
स्विकृत दरबन्दी भएका भन्दा नभएका विधालयको सिकाइ राम्रो
पर्यटनका थुप्रै संभावना भित्र, जाजरकोट
जाजरकोटमा रेडपाण्डाको गणना, ५० बढि रहेको अनुमान ।।
प्रहरी प्रमुख मल्ल जाजरकोटमा
© 2016 Radio Jajarkot. All rights reserved.
Powered by - DigiMed